श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले राती साढे २ बजे पलङमुनि हेर्दा... - Naya Pusta
श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले राती साढे २ बजे पलङमुनि हेर्दा…
श्रीमतीसग मस्त सुतिरहेका श्रीमान् राती साढे २ बजे पलङमुनिबाट आवाज आएपछि ब्यूँझिए । उनले पलङमुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्यहाँ उनकी श्रीमतीका प्रेमी लुकिरहेको भेट्टाए । बेडरुममा श्रीमतीका प्रेमी भेट्टाएपछि उनी रिसले आगो भए । उनले प्रेमीलाई त्यहीँ मरणासन्न हुनेगरी कुटे । हल्लाखल्ला भएपछि गाउँलेहरु जम्मा भए । ती व्यक्तिले श्रीमती र उनका प्रेमीलाई एउटा कोठामा थुनिदिए ।
भारतको बिहार कटिहार जिल्लामा यस्तो विचित्रको घटना भएको हो । मंसुर नाम गरेका ती व्यक्तिकी पत्नी फरिदा खातुन पाँच बच्चाकी आमा हुन् । केही समय अघिदेखि फरिदाको गाउँकै मोहम्मद मासूम नामका युवकसँग प्रेम सम्बन्ध चलिरहेको बताइएको छ । मंसुरले यसअघि पनि आफ्नी श्रीमतीलाई प्रेमीसँग आपत्तिजनक हालतमा भेट्टाएका थिए । त्यतिबेला उनले अबका दिनमा यस्तो नगर्ने चेतावनी दिएर छोडेका थिए । तर, ती दुईले त्यसपछि पनि लगातार भेटिरहे ।
मंसुरको घरमा पाँच कोठा छन् । फरिदाले आफ्ना छोराछोरीलाई अर्कै कोठामा सुताएर आफू श्रीमान्सँग सुत्ने गर्थिन् । श्रीमान् र परिवार निदाएपछि उनले रातीमा आफ्ना प्रेमीलाई घरमै बोलाउँथिन् । मंगलबार पनि यस्तै भएको थियो । फरिदासँग भेट्न उनका प्रेमी मासूम उनको बेडरुममै पुगेका थिए । त्यही बेला उनका श्रीमान्ले ढोका ढक्ढक्याए । डराएका मासुम बेडमुनि लुके । तर मंसुरलाई निद्रा लागेन । त्यही कारण बेडमुनि सुतेका मासूम पनि भाग्न पाएनन् । घटनापछि गाउँमा पञ्चायत बोलाएको बताइएको छ ।
भारतीय ड्राइभरको प्रेममा पागल यी साउदीकी युवती, नेपाल हुँदै यसरी पुगिन् भारत !
दश वर्षीय बालकको तौल १९२ किलोग्राम (फोटो फिचर)
मलमासको बेला शारिरीक सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तोभन्छ ज्योतिष शास्त्र (भिडियो)